Maalinta ciidanka Badda ee Soomaaliya - BBC Somali - Warar
Maalinta ciidanka Badda ee Soomaaliya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 17 Febraayo, 2013, 12:50 GMT 15:50 SGA
Magaalada Muqdisho ciidanka badda ee Soomaaliyeed ayaa u dabbaaldagay sanad guuradii 51-aad ee ka soo wareegtay aasaaskooda.
Ciidanka Badda oo u dabaaldagaya maalintii la aasaasay oo maanta ku aadan.
Magaalada Muqdisho ciidanka badda ee Soomaaliyeed ayaa u dabbaaldagay sanad guuridii 51aad ee ka soo wareegtay asaaskii ciidankaasi. Waxaa ay soo bandhigeen dhoolatus ay ku sameeyeen xeebta Muqdisho iyo gaadda ka ciyaar ay ciidamo sameynayeen.
Waxaa munaasabadda ka qudbadeeyay wasiiro iyo saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya.
Wariyaha BBCda Maxamed Ibraahim Macalimuu oo goob joog ka ahaa bandhigga iyo munaasabadda ciidmada badda, ayaa wareystay Taliyaha Ciidanka Badda Soomaaliyeed, Admiral Faarax Cumar Axmad.